चुरे दोहनले संकट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
चुरे दोहनले संकट
श्रावण १९, २०७६ मोहन बुढाऐर
(धनगढी) — गुल्मीका टिका सिंह ठकुरीले तत्कालीन राणाबाट विसं. १९६५ मा कैलालीमा रोजी बिर्ता पाए । उनी सिपाही थिए । उनीबाट राणा महाराज खुसी भएर कैलालीको कुनै ठाउँमा रोजेर बस्न भनेकाले अवकाश जीवन बिताउन भारतको बाटो हुँदैं कैलाली आएका थिए ।
त्यतिबेला उनले अहिलेको गौरीगंगा ३ कुचौनीको फाँट रोजेर गुल्मी फर्के । विसं. २०१३ मा उनले रोजेको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गरे । कैलालीको हसुलियामा बसेका ७/८ परिवार थारूलाई आफ्नो छिमेकी र सहयोगीका रूपमा यहाँ लिएर बसाले । थारूलाई जमिन कोठारी दिएर उनी पुर्खौली घर गुल्मी गए । उनका नाति ६० वर्षे ज्ञानबहादुर सिंह भन्छन्, ‘२०२३ सालदेखि स्थायी रूपमा गुल्मीबाट यता सरेका हौं ।’
‘घाँसे मैदानको चारैतिर जंगल र पूर्वतर्फ शिव गंगा नदी कलकल बग्थ्यो,’ उनले भने, ‘पानीका लोभले जिजुबुबाबाट यो ठाउँ रोजिएको हो ।’ उनका अनुसार गाईगोरु र मान्छेका लागि पनि पानी पिउन हुन्थ्यो । नजिकै घाँसदाउरादेखि गाईगोरु चराउन मिल्ने जंगल पनि थियो ।
‘सुदूरका पहाडीहरू पछि सम्म, हिउँदमा गोठ सर्ने भनेर तराई झर्दथे, बर्खामा उतै पहाड उक्लन्थे,’ उनले भने, ‘तीसको दशकतिर मात्रै सुदूरका पहाडीहरूले पनि जिजुबुबासंँग जमिन मागेर बस्न थालेका हुन् ।’
बस्तीमा बसोवास गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएपछि वनजंगलको विनाश हुन सुरु भएको हो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि यहाँ बसोवास बढेको हो । ‘पहिला जिजुबुबाको बिर्ता जग्गा ४/५ सय बिघा जति मात्रै थियो होला,’ उनले भने, ‘जिजुबुबाले डेढ सय परिवारलाई जति बाँडे ।’ बाँकी जमिन बसाइ सराइँ गरी आउनेको आफ्नै आवादी हो ।’
उनका अनुसार त्यसबेला आवादी गरेको स्थानबाट शिवगंगा करिब एक किलोमिटर दूरीमा बग्थिन् । १७ वर्षे उमेरमा यहाँ बसाइ सरेका सिंहलाई अहिले बुढ्यौलीले छुन थालिसक्यो । ‘केही वर्षअघिसम्म शिवगंगा नदीले घर बगाउला भन्ने कल्पना समेत गरिएन,’ उनले भने, ‘समयको दुष्चक्र हो, हेर्दाहेर्दै बस्ती बगाउन थाल्यो । कति परिवारको त यहाँबाट उठिबास भइसक्यो ।’
गौरीगंगा नगरपालिका–३ अन्तर्गत पर्ने कुचौनी, पूर्व पश्चिम राजमार्गको पुलछेउको बस्ती हो । कुचौनीमा शिवगंगा नदीको बाढी लाग्न थालेको धेरै वर्ष भएको छैन । ‘दस/पन्ध्र वर्ष जति भयो गाउँमा नदी पस्न लागेको’ गाउँका पुराना बासिन्दा बाधुराम चौधरीले भने, ‘नदीको सिरानमा भएको वन फडानी र ढुंगागिट्टीको दोहन सुरु भएपछि बाढी लाग्न थालेको हो ।’ उनी शिवगंगा नदी तटबन्ध उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणपछि कुचौनीमा घनाबस्तीको विकास भएको थियो । पाँच/सात सय घरधुरी भएको कुचौनी गाउँमा अहिले बाढीको समस्याको कारण डेढ सय घरपरिवार मात्रै रहेको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । जसमध्ये ३५ परिवार अति जोखिममा छन् । कुनै पनि बेला नदीले उनीहरूको उठिबास हुन सक्छ । उनले बर्सेनि ३/४ हेक्टर जमिन नदीले कटान गर्दै लगेको बताए ।
उनका अनुसार चुरेबाट उत्पन्न शिवगंगा नदीको चौडाइ उतिबेला बढीमा १४ मिटर जतिको थियो । अहिले राजमार्ग दक्षिण हजार मिटर फराकिलोमा बग्ने गरेको छ । राजमार्गको पुल नै २ सय ५८ मिटरको लम्बाइको छ ।
अनियन्त्रित दोहन र वनजंगल विनाशले गर्दा शिवगंगाले एउटा पुरानो बस्ती कुचौनीको अस्तित्व संकटमा मात्रै पारेको छैन् दीपनगर, डुमंलीया, शान्तीकटान, उर्मा, करैघाट लगायतका बस्ती जोखिममा परेका छन् । तल्लो तटिय क्षेत्रमा पर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाको उर्मा, फूलबारीलगायतका बस्तीमा नदी पस्छ ।
उर्वरभूमि बगरमा परिणत
चुरेबाटै निस्केका खुटिया, गौरीगंगा, पथरिया, कान्द्रा र काँडा नदीमा पनि बर्खामा आउने बाढीले जिल्लाको दक्षिण भेगमा ठूलो उर्वरक्षेत्र बगरमा परिणत भइसकेको छ । ती नदीले बर्सेनि १५/२० हेक्टर जमिन बगरमा हुँदै गएको छ ।
कैलालीको चुरेबाट उत्पन्न भएको गोदावरी धनगढीदेखि मोहना नदीले चिनिन्छ । जिल्लाको दक्षिण पूर्व भएर १०२ किलोमिटर लम्वाईमा बग्ने मोहना नदीले गोदावरी देखी भजनी सम्म दुई दर्जन बस्ती बगरमा परिणत गरिसकेको छ । कैलारी गाउँपालिका—७ मा पर्ने बेलापरसुवाको ३ सय परिवारको उठिबास भएको छ । बस्तीको आधा जमिन काटेर आधा जमिन पाटेर उर्वरक्षेत्र बगर बनाएको छ ।
स्थानीय जग्गु चौधरी मोहनामा साठीको दशकपछि बस्ती बगाउने गरी बाढी आउन थालेको बताउँछन् । त्यस्तै खुटिया, गौरीगंगा, कान्ध्रा र पथरिया नदीले कैलालीको मध्य पूर्व र दक्षिणी भेग डुबानको समस्या निम्ताएको भजनीका स्थानीय बिजयलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
भजनी नगरपालिकाभित्र चुरेबाट बग्ने खोलानालाले हालसम्म एक हजार हेक्टर जति खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइसकेको श्रेष्ठको दाबी छ ।
जिल्लाकै सबैभन्दा बढी अन्न उत्पादन गर्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले उत्पादन क्षेत्र बाढीकै कारण घटदै गएको पनि छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कैलालीमा ७२ हजार हेक्टरमा धान खेती लगाइने भए पनि अहिले त्यतिमा लगाइँदैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल कममा धानखेती गरिएको ज्ञानकेन्द्रका सूचना अधिकारी रामचन्द्र भट्ट बताउँछन् ।
‘चुरेमा भएको वन विनाश र जथाभावी भइरहेको ढुंगागिट्टी उत्खननले कैलालीमा बाढीको समस्या विकराल रूपमा देखापर्न थालेको हो,’ भन्छन्, वन तथा वातावरण विज्ञ पूर्व डिएफओ रमेश चन्दले बताए ।
चुरे कमजोर : तराईको भविष्य संकट
पूर्व डीएफओ चन्दले चुरेमा वनफडानी, अतिक्रमण, खोलानालाबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन र मानवीय क्रियाकलापहरूले चुरे कमजोर हुँदै गएको बताए । ‘चुरे तराईको टाउको हो,’ उनले भने, ‘अहिले टाउकोमा प्रहार भइरहेको छ । फुट्या , भत्कियो भने के होला ? सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं । त्यसैले चुरे संरक्षणको उपाया गरिएन भने तराई मरुभूमि बगरमा प्रणित हुन बेर लाग्दैन ।’
‘चुरेमा भू–क्षय, बस्ती जोखिम , पानीका मुहान सुक्दै जानु र तराईमा बाढीको प्रकोप चुरे दोहनले निम्ताएको संकट हो,’ उनले भने, ‘चुरेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए तराईको भविष्य समेत संकटमा निश्चित पर्छ ।’
भावर क्षेत्रमा पानीको अभाव
चन्दका अनुसार चुरेको फेद भावर प्रदेशमा पर्छ । भावर तराईको पानीको भण्डारण गर्ने ठाउँ हो । उनले भने ‘पानी रिचार्ड हुने भावर क्षेत्रको बचाउन नसकिए तराई मरुभूमिमा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।’
चुरे फेदका बस्तीमा पानीको संकट भएको खानेपानीका योजना अलपत्र परेका छन् । ‘पानीका मूलहरू सुकेर कयौ योजनाहरू अलपत्र परेको अवस्था छ,’ खानेपानीका एक जना इन्जिनियरले भने, ‘विभिन्न प्रकारले चुरे र खोलानालाको दोहनले रिभर बेल्टको रिचार्डलाई असर पार्छ ।’ वनविज्ञ चन्दले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको बताए ।
सडक निर्माणका नाममा जभाभावी डोजर प्रयोगले चुरेमा भु—क्षण बढेको छ । चुरेका कयौं बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन । गोदावरी देखी फुलबस्ती र भ्यागुतो पानी जाने सडक निर्माणले ११ ठाउँमा पहिरो गएको छ । पानीको मुल पुरिएको स्थानीय कैलास कुमार जोशी बताउँछन ।
‘विकास भन्दा बढी विनाश भएको छ’ उनले भने, ‘गोदावरी नदी माथिको चुरे डोजर लगाएर सडकका नाममा चुरे पहाड भत्काउने काम मात्रै भएको छ ।’
डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कडेँलले चुरे भावर क्षेत्रमा सडक लगायत पूर्वाधार विकासका योजना समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिनाका अघि बढाउन ठिक नभएको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १२:०१
श्रमले आर्जेको सम्मान
श्रावण १९, २०७६ जितेन्द्र साह
(विराटनगर) — सडक छेउमा बसेर जुत्ता मर्मत गरिरहेकाहरूले कति पढेका होलान् ? बढीमा दुई/चार कक्षा । हामीमध्ये धेरैले यस्तै सोच्छौं होला । तर विराटनगर मेनरोडस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय छेउमै २७ वर्षदेखि जुत्ता मर्मत गर्दै आएका ४८ वर्षीय उमेश रामले बीएको अध्ययनलाई बीचमै छाडेका रहेछन् । गजबको भाषाशैली, टेलिफोन डायरीको सुन्दर अक्षर र ग्राहकसँग गर्ने सभ्य व्यवहारले जो कोहीलाई पनि उनको पृष्ठभूमि खोतल्न करै लाग्छ ।
दलित समुदायका रामले नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी फरर पढ्छन् र बुझछन् , आवश्कता परे बोल्छन् पनि । उनकै छेउमा लहरै जुत्ता मर्मत गरी बसिरहेकाहरू पनि उनी जत्तिकै नपढे पनि धेरैले प्राथमिक वा माध्यमिक तहसम्म चाही पढेकै छन् ।
बुबा जुठी रामको निधन र घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनी २१ वर्षमै पुर्ख्यौली पेसालाई निरन्तरता दिन बाध्य भए ।
‘बीएको पढाइ सकेर सरकारी जागिर गर्ने इच्छा थियो तर बुबा बितेपछि घरको डामाडोल अवस्थाले त्यो पूरा भएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । भारत बिहारको मधुवनीस्थित देवनारायण यादव उच्चमाविबाट आईए उत्तीर्ण गरेका हुन् । उनका छ सन्तान छन्, सबै शिक्षित छन् ।
रामका जेठी छोरी पुष्पाले म्याट्रिक, माहिली अन्नपूर्णाले बीए, साहिँली रुबीले बीए अनर्स उत्तीर्ण गरेका छन् भने कान्छी नीरु ८ कक्षामा पढदै छिन् । तीन छोरीपछि जन्मेका जेठो छोरा रोशन ११ कक्षासम्म पढेर भारतको दिल्लीमा जागिर गर्दैछन् भने कान्छो विशाल कक्षा–९ मा पढदै छन् । रामले जेठी र माहिली छोरीको बिहे गरिसकेका छन् । उनका दुई ज्वाइँ नै जागिरे छन् । भारत विहारको दरभंगा जिल्लास्थित दुलारपुर–१० का नागरिक रामको परिवारको नेपालसँग पुरानो र आत्मीय साइनो छ । उनका जेठो हजुरबुबा शंकर र बुबा जुठीको कर्म क्षेत्र पनि विराटनगर नै थियो । तीनवटै पुस्ताको काम गर्ने थलो भने त्यही सडक छेउ रहेछ । अद्भुत के छ भने रामको सारा परिवार विहारमै छ । उनी एक्लै एउटा कोठा भाडा लिएर विराटनगर–६ को सरोचिया बस्तीमा बस्छन् । उनको भान्सा र शयन कक्ष त्यही एउटा कोठा हो ।
बुबा जुठीको निधनपछि २०४९ सालमा विराटनगर आएको रामले बताए । ‘विराटनगरमै काम गर्दागर्दै बुबा बिरामी परेपछि घर फर्कनुभयो, उतै बित्नुभयो,’ रामले भने, ‘नेपालमा कर्म गर्नेको इज्जत छ भनेर बुबा र हजुरबुबाले भनिराख्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर म पनि तानिएर यतै आएँ, अनि फर्किनै सकिनँ ।’
उल्लेखनीय के छ भने रामलाई स्थानीय सरकारी कार्यालयका कर्मचारी एवं सञ्चारकर्मीदेखि नागरिक समाजसम्म धेरैजसो विराटनगरवासीले चिन्छन्, आदर र विश्वास गर्छन् । उनी एक दशकदेखि विराटनगरकै एक होटलमा वेटरको काम पनि गर्छन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख दिलीपकुमार गौतमले दिनरात श्रम गरेर गरिखाने राम र उनका साथीहरूको शालीन व्यवहार देखेरै नहटाएको बताए । ‘आवागमनमा अवरोध नहुने गरी राम र उनका साथीहरू फुटपाथको एक छेउमा हाम्रो कार्यालयको भित्तासँग टाँसिएर आनन्दले व्यवसाय गर्छन्,’ उनले भने, ‘वरिपरि चिटिक्क पारेर बस्छन् ।’
उनी भारतका सुकुम्बासी पनि होइनन् । खेतीपाती नभए पनि रामको गाउँमा दुई कट्ठा पुर्ख्यौली जग्गामा करेसाबारीसहितको घर छ । सरकारले रासनकार्ड दिएको छ जसका आधारमा परिवारजनले एकदमै न्यूनतम मूल्यमा खाद्यवस्तु पाउँछन् ।
यति सबथोक हुँदाहुँदै विराटनगर मोहको कारण के त ? भनेर सोध्दा उनी भन्छन्, ‘सारा जवानी यतै बित्यो, स्थानीयसँग घुलमिल भयो, अब विहारमा रत्तिभर मन लाग्दैन, त्यहाँ निसास्सिन्छु ।’ तर यहाँको जति कमाइ आफ्नै गाउँमा पनि गर्न सकिने रामले बताए ।
उनी यहाँ दैनिक औसत ३ सय नेरु कमाउँछन् । दसैं, तिहार र छठ पर्वका बेलामा दैनिक औसत ७ सय नेरुसम्म आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । तर रामले भने, ‘मनसुन अफ सिजन हो, यतिखेर कमाइको ठेगाना हुन्न, कहिलेकाहीं बोहनी पनि नहुन सक्छ ।’ रामले महिनामा ३ देखि ४ हजार नेरु घर पठाउने गरेको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ११:५८
काम नसकिँदै भासियो सडक
वृद्धवृद्धा सडकमा, आश्रम प्रयोगविहीन
पोहोर बगायो घर, अहिले आमाछोरी
वर्षाले यात्रामा जोखिम
ग्रामीण सडकले वनमा क्षति